Ny didy jadona dia firenena iray izay olona iray na antoko politika manana ny fahefana hanao izay tiany. Ao aminny didy jadona, matetika tsy manana zo maro na ny fahafahana ny olona. Ny mpanao didy jadona dia avy aminny fitondrana noho ny antony ...
Abel Azcona dia mpanakanto fantatra aminny maha- zava - kanto mahatsiravina espaniola. Ny asany, miaraka aminny lafiny autobiografika sy lafiny politika dia maneho fikomiana lalina aminny fiaraha-monina. Ny asany voalohany dia ny momba ny maha-iz ...
Ny hoe reny no foto-teninny teny hoe firenena, ary manana ny satanny reny tokoa ny firenena teo anivonny tontolo malagasy. Taminny fanjanahantany teto Madagasikara, i Frantsa izay nanjanaka ani Madagasikara dia nantsoinny Malagasy hoe reny Frants ...
Ny sinagoga dia trano fivavahan ny Jiosy na ny Samaritana isan-toerana. Ny tena niandohan ny sinagôga, izany hoe ny toerana fivorian ny mpino izay tafasaraka tamin ny fivavahana ao amin ny Tempoly, dia mety tamin ny andron ny mpaminany na tamin n ...
Ny Mpaminany roa ambinny folo na Mpaminany 12 na Mpaminany madinika, dia boky na horonam-boky ao amin’ny Tanakh, Baiboly hebreo, izay voasokajy ao amin’ny Nevi’im aharonim, zana-tsokajin’ny Nevi’im izay fizaràna faharoa ao amin’ny Tanakh manaraka ...
Ny sakramentan ny fanambadiana dia iray amin ireo sakramenta fito ao amin ny fiangonana katôlika sy ao amin ireo fiangonana ôrtôdôksa. Amin ny Katôlika," Ny fifanekena ara-panambadiana, izay anorenan’ ny lehilahy iray sy vehivavy iray eo amin’ iz ...
Ny eokaristia dia fomba manana ny maha izy azy ao amin ny fivavahana kristiana izay anamasinan ny mpanao raharaham-piangonana ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanan ny mpivavaka izany araka ny nandidian i Jesoa Kristy tamin ny niarahany mi ...
Ny sakramentan ny fivalozana sy ny fampihavanana ao amin ny Fiangonana katôlika sy ao amin ny Fiangonana ôrtôdôksa dia iray amin ireo sakramenta fito. Ny tanjon io sakramenta io dia ny famelàn Andriamanitra ny fahotan ny olona manao fivalozana. A ...
Ny Bokini Malakia na Bokini Malaký dia boky ao amin’ny Tanakh sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Isan’ireo atao hoe Mpaminany madinika izy. Ahitana ireo tenin’ny mpaminany mahazatra toy ny fampahatsiahivana ny nifidian’ ...
Ny fanosorana ny marary dia sakramentan ny Fiangonana katôlika rômanina sy an ireo Fiangonana ôrtôdôksa ary an ny Fiangonana anglikana izay ametrahana ireo mijaly eo ambany fitseran i Kristy. Ny fanosorana dia atao amin ny menaka voahasina sy ank ...
Ny katôlisisma dia fivavahan ny Kristiana mankato ny fahefan ny papa sy ny eveka, indrindra momba ny famolavolana ny foto-pampianarany, ny fampitana sy ny fandaminana ny fanompoam-pivavahany. Ny Eglizy katôlika dia mihevitra fa ny vita batemy reh ...
Ny sakramentan ny filaharana na ôrdinasiôna dia fihetsika sy teny araka ny litorjia izay ampidirana ao amin ny filaharan ny mpanao ny asam-pisoronanana kristiana, izay ankalazain ny eveka. Ahitana ôrdinasiôna koa ny ao amin ny fiangonana anglikan ...
Ny paolisianisma dia fivavahana nipoitra aminny kristianisma tatsinanana, angamba armeniana, izay tsy misy intsony ankehitriny, mitsipaka ny fisianny mpitondra fivavahana, ny fampiasana ny hazo fijaliana, ny fanajana ny olo-masina, ny sakramenta, ...
Ny sakramenta na Sakramenta Masina, ao amin ireo fiangonana kristiana tranainy, dia fombam-pivavahana inoana fa naorin i Jesoa Kristy ary nampitandreminy ny Fiangonana mba hampitana sy hanomezana ny fahasoavan Andriamanitra. Sady famantarana ny f ...
Ny konfirmasiona, ao amin ny Fiangonana kristiana, dia fomba atao ampahibemaso manome fahafenoana ny fanomezan ny Fanahy Masina amin ny alalan ny fanamafisana ny famantarana azo tamin ny batisa.
Ny iarsanisma na iaresanisma dia fivavahana naorin ilay soltàna atao hoe Sahâk tamin ny faramparan ny taonjato faha-14 tao Iràna andrefana. Amin ny fiteny korda dia atao hoe yâresân io fivavahana io. Amin ny teny persàna kosa dia atao hoe اهل حق ...
Ny Tononkira Fanaperana na Tononkirani Solomona na Tononkira dia Tononkira dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Taloha izay mitantara ny resaka ifanaovanny mpifankatia mifampitaona sy mifaneho ny fitiavany sy ny faniriany. Tantara anoh ...
Ny fasisma dia karazana fitondrana iray, izay heverina manan-danja kokoa noho ny olona iray, vondrona, fahafahana, na ny fandaharana ny firenena. Ny firenena ambaninizany karazana fitondram-panjakana izany dia matetika entinny olona iray antsoina ...
Ny fiovam-pisia-maha-izy na transsobstansiasiona dia fiovanny maha-izy ny zavatra iray ho tonga zavatra hafa. Aminny Katolika dia fiovanny mofo ho tenani Kristy sy ny divay ho rani Kristy ao aminny eokaristia aminny alalanny Fanahy Masina ny fiov ...
Ny Fanasanny Tompo dia fomba manana ny maha izy azy ao amin ny fivavahana kristiana izay anamasinan ny mpanao raharaham-piangonana ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanan ny mpivavaka izany araka ny nandidian i Jesosy Kristy tamin ny niarah ...
Ny konsobstansiasiona, araka ny fampianaram-pinoana loterana, dia ny fitehirizanny mofo sy ny divay ny maha-izy-azy nefa miara-mikambana aminny maha-izy-azy ny tena sy ny rani Jesosy Kristy. Izany fampianarana izany, izay nofaritani William of Oc ...
Ny hamandoana dia fisianny rano na eton-drano ao aminny rivotra na ao aminny zavatra hafa toy ny lamba, ny mofo, sns. Ao aminny rivotra dia azo refesina aminny fandrefy hamandoana sady aseho aminny isanjato ny habeny.
Ny Paska jiosy na Paka jody izay atao hoe Pesah aminny teny hebreo dia fety lehibe aminny Jiosy izay ankalazana sy ahatsiarovana ny fialanny Zanaki Isiraely avy tao Ejipta sy ny niampitanizy ireo ny Ranomasina Mena teo ambany fitarihani Mosesy ; ...
Ny andian-teny latina hoe Soli Deo gloria, izay adika aminny teny malagasy hoe anAndriamanitra irery ny voninahitra dia iray aminireo ainga fototry ny fivavahana kristiana noraisinireo teolojiana protestanta, ka isanireo andian-teny latina norais ...
I Hamàna na Hamana dia olona resahina ao aminny Bokini Estera, izay minisitry ny Fanjakana persiana taminny fotoana nanjakani Ahasoerosy. Araka ny lovantsofina jiosy dia evanny fankahalana jiosy i Hamàna noho izy nikasa handripaka ny Jiosy, araka ...
I Melkizedeka na Melkisedeka na Melkitsedeka dia mpanjaka mpisorona resahina ao aminny Testamenta Taloha. Ao amin’ny fitantaranny Baiboly dia nihaona tamini Abrahama i Melkizedeka rehefa niverina avy any aminny ady nifanaovany taminireo mpanjaka ...
Ny Fetinny Reny dia andro firavoravoana ankalazaina hanomezam-boninahitra sy fanehoam-pitiavana ny reny ao aminny firenena maro eto an-tany. Aminio fety io dia manolotra fanomezana ny reniny ny zanaka ka mety ho mofo mamy izany na voninkazo na za ...
Ny demografia dia fikarohana siantifika mikasika ny fiovanny mponina araka ny fiterahana, fahafatesana, fifindra-monina, ary ny fahanterana. Ny demografy dia misy ifandrasana aminny fanabeazana, firenena, finoana, ary ny fihaviana.
Ny sekoly dia toerana fianarana, fandratoana fahaizana sy fahalalana. Raha ny fizotram-pianarana ao Madagasikara dia mizara 4 aminny ankapobeny ny sekoly, aorianny garabola: Ny sekoly ambaratonga faharoa izay maharitra 3 taona. Ny fianarana ambar ...
Mino ny liberaly sasany fa tsy hisy ny fahafahana tanteraka raha tsy misy ny fitovian-jo, ary ny fitondram-panjakana dia tokony hampiroborobo ny fitoviana aminny alalanny fanabeazana sy ny fanomezana fikarakarana ara-pahasalamana tohananny hetra. ...
Ny habadoana dia toetranny olona izay nanatrika fianarana, anefa tsy mahay mamaky, manoratra na mikajy. Samihafa aminireo olona tsy mahay abidy ny olona bado, satria bado tsy hary nanatrika fianarana ny olona tsy mahay abidy. Eny aminny firenena ...
I Ellen Gould White dia vehivavy kristiana amerikana nandray anjara taminny fanorenana ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito, niaraka amini James White vadiny sy i Joseph Batese. Teraka taminny 26 Novembra 1827 sy maty taminny 16 ...
Andriantsoly dia mpanjaka malagasy sy mahorey taminny antsasany voalohanny taonjato faha-19. Nantsoina hoe Tsi Levalou izy fahakeliny. Malaza Andriantsoly noho ny nisafidianany ny hikambanani Maiôty aminny Fanjakani Frantsa taminny 25 Avrily 1841 ...
Ny fiteny mandarina, izay tsorina indraindray amin ny hoe "fiteny sinoa", dia iray amin ireo karazam-piteny sinoa tenenina ao amin ny tapany avaratra-atsinanan i Sina an-kôntinenta. Ny fiteny mandarina no be mpiteny indrindra maneran-tany. Sorata ...
Ny angatra dia aretina mifindra aminny alalanny firaisana ara-nofo vokatry ny Neisseria gonorrhoeae, hitani Albert Neisser taminny 1879. Antibiôtika no hanasitranana ny angatra, fa manomboka misy ny otrika tsy andairanny antibiotika. Mety tsy ahi ...